PROPERTY BENCHMARK PRICES FOR YEAR 2019-2020 (MANDALAY REGION) – JVMyanmar
Mandalay Benchmark Price Release for Year 2019-2020 and Summary Notes
Mandalay Benchmark Prices report for 2019-2020 financial year of real estate sector was released by Internal Revenue Department (IRD) on September, 2020. Mandalay is the economic center of Upper Myanmar and considered the center of Myanmar culture. Mandalay, the last loyal capital founded at the foot of Mandalay Hill, is the second largest city in Myanmar, after Yangon. Mandalay’s real estate sector had been growing steadily before the COVID-19 pandemic struck but the second wave of the pandemic has been striking harder on the market than the first one. The market has seen almost no transaction in September and businesses are hard to be carried out of the restrictions. Outer city land plots have seen more marketable than inner city land in this time. According to the government land benchmark price information, we have learnt that land prices in most of the area are increased significantly. Land located along the main streets are increased around 40 % and inner streets are increased around 60%. In Myo Thit area, land prices are raised around 20%. We have learnt that land plots along 80,81,82,83 and 84th Street in Chan Aye Tharzan Township are the most expensive pricing 429,752 MMK/ft2 which is 103% increase compared to last year. Significant land price reduction was performed in 2018-2019 financial year for the purpose to promote more sales transactions but most of the 2019-2020 financial year benchmark data have the same value from the year 2017-2018 benchmark. However, having said that in the previous article of Yangon Benchmark Prices, the benchmark prices are referenced for the tax purpose only, the actual market prices could be relatively higher or lower than the benchmark prices described in the report.
Please click the following links to learn sample property benchmark prices for Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay region for 2019-2020.
Please leaveamessage in comment box to know Benchmark Prices for other townships in Mandalay for Year 2019-2020 levied by Price Valuation Board
Land benchmark prices for Chan Aye Thar Zan Township for year 2019-2020 levied by price valuation board
Benchmark prices on apartment selling/buying in Chan Aye Thar Zan Township for 2019-2020 levied year
၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြပ်နှစ် မန္တလေးမြို့ အတွက်ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမည့်မြေကွက်စံနှုန်းများ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် မန္တလေးမြို့ အိမ်ခြံမြေကဏ္ဍအတွက် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးမည့် အစီရင်ခံစာကို ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။ မန္တလေးမြို့ သည် အထက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးအချက်အချာကျသော မြို့ ဖြစ်သကဲ့သို့မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရာ နေရာတခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ပြီးနောက် ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည့် မန္တလေးမြို့ သည် မြန်မာနိုင်ငံဧ။် နောက်ဆုံးမင်းဆက်စံမြန်းရာ မင်းနေပြည်တော် ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ ယခုကြုံတွေ့ နေရသော ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကပ် မတိုင်ခင် အချိန်က မန္တလေးမြို့ ၏ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကွက်သည် ကောင်းမွန်စွာ တိုးတက်ခဲ့ သော်လည်း ယခု အချိန်တွင်မူ ယခင်လများထက် ပိုမို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခဲ့ ပါသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဈေးကွက် အရောင်းအ၀ယ်သည် မရှိသလောက်နည်းပါးခဲ့ ပြီး ဆိုးရွားသော ကပ်ရောဂါ အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ရန် ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းကမ်းများကြောင့် အိမ်ခြံမြေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲများတွေ့ ရှိခဲ့ ရပါသည်။ ယခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာအရမူ မန္တလေး မြို့ အပြင်ဘက်မြေကွက်များသည် မြို့ တွင်းရှိ မြေကွက်များထက် ဈေးနှူန်းအထူး မြင့်တက်နေကြောင်း လေ့လာရပါသည်။ ၄င်းအစီရင်ခံစာအရ မန္တလေးမြို့ ၏ နေရာတော်တော်များများတွင် မြေကွက်များ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုများ ရှိသည်ကို တွေ့ ရှိရပါသည်။ မြို့ ၏အထင်ကရ လမ်းမကြီးတလျှောက်ရှိ မြေကွက်များ၏ဈေးနှုန်းသည် ယခင်နှစ်များထက် ၄၀ % မြင့်တက်ခဲ့ ပြီး အတွင်းဘက် လမ်းများမှာမူ ၆၀% အထိ တိုးမြင့်ခဲ့သည်ကို လေ့လာရပါသည်။ ချမ်းအေးသာဇံမြို့ နယ်အတွင်း နံပါတ် ၈၁၊၈၂၊၈၃ နှင့် ၈၄ အစရှိသော လမ်းများရှိ မြေကွက်များသည် စတုရန်း တပေ လျှင် သိန်း ၄၂၉ ၇၅၂ ကျပ်ဖြင့် အမြင့်ဆုံး ဈေးရှိခဲ့ ပြီး ၄င်းတန်ဖိုးသည် ယခင်နှစ် သတ်မှတ်ဈေးနှုန်း၏ ၁၀၃% အထိ တိုးမြင့်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာရပါသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်မူ အိမ်ခြံမြေ အရောင်းအ၀ယ် တိုးတက်စေလိုသော ရည်၇ွယ်ချက်ဖြင့် မြေကွက်ဈေးနှုန်းများကို သိသိသာသာ လျှော့ချခဲ့ သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မူ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း သတ်မှတ်သော ဈေးနှုန်းများအတိုင်း မပြောင်းလဲပဲ ထားရှိသည်ကို လေ့လာတွေ့ ရှိရပါသည်။ စည်းကြပ်ထားသော မြေကွက်တန်ဖိုးများသည် အခွန်ကောက်ခံရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မည့် လက်ရှိ ဈေးကွက်တန်ဖိုးများမှာ အစီရင်ခံစာပါ သတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုန်းများအတိုင်းမဟုတ်ပဲ ပြောင်းလဲခြင်းများ ရှိနိုင်သည်ကို သတိပြုရပါမည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ် ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အိမ်ခြံမြေ ကာလတန်ဖိုးများအား နမူနာအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ လင့်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ်အတွင်းရှိြေ မကွက်များအတွက် ကာလတန်ဖိုး သတ်မှတ်ပေးမည့် မြေကွက်စံနှုန်းများ
၂၀၁၉-၂၀၂၀စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ချမ်းအေးသာစံမို့ နယ် အတွင်းရှိ တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ခြင်းများ အပေါ် စည်းကြပ်ရန် နှူန်းထားများ